ယာဉ်မောင်းအားလုံးအတွက် ပို၍ ဘေးကင်း၊ မျှတမှုရှိသောအက်ပ် - Grab ဘက်ကနေရပ်တည်လိုက်ပါ | Grab MM
ယာဉ်မောင်းအားလုံးအတွက် ပို၍ ဘေးကင်း၊ မျှတမှုရှိသောအက်ပ် – Grab ဘက်ကနေရပ်တည်လိုက်ပါ
Grab မှာအမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေကိုပေးစွမ်းဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့အပြင် အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင် အမြဲမပြတ် လှုံ့ဆော်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာသင့်ရဲ့ ယာဉ်မောင်း အကောင့်အချက်အလက်တွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အက်ပ်တွေနဲ့ စနစ်တွေအားလုံးကို လုံခြုံရေးတင်းကျပ်အောင် သေချာ လုပ်ဆောင်မယ့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ရှိပါတယ်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ မျှတမှုရှိခြင်းဆိုတဲ့ အဓိကအချက်တွေကိုအလေးပေးဆောင်ရွက်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ဟာယာဉ်မောင်းရော၊ ခရီးသည်အတွက်ရောခရီးသွားအတွေ့အကြုံကောင်းတွေ ရရှိစေဖို့ ယာဉ်မောင်းတွေကို ခရီးသည်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ Grab က တရားဝင်မထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ယာဉ်မောင်းအက်ပ်တွေကို အသုံးပြုပြီး ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့စနစ်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ အဲ့ဒီအက်ပ်တွေကို သူတို့ ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ပြီးတော့ ဒါမှမဟုတ် မျှတမှုမရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိအောင် ရည်ရွယ်ပြီး ဖျက်စီးမယ့်စနစ်တွေ ထည့်သွင်းပြီးတော့ ဖန်တီးထားပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ သူတို့ဟာ တရားဝင်အက်ပ်တစ်ခု တည်းအပေါ်အပြည့်အဝအားကိုးတဲ့ အခြားယာဉ်မောင်းတွေထက် သေချာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေ ပေးတယ် လို့ ယူဆပြီးအဲ့ဒီ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေဆီကအက်ပ်တွေကိုရှာဖွေကြပါတယ်။
1. အဲ့ဒီမွမ်းမံထားတဲ့ အက်ပ်တွေကို Grab က ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဲ့ဒီအက်ပ်တွေကို သင့် စက်မှာဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မသိတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲဖန်တီးသူတွေကို သင့်စက်ထဲက ဒေတာတွေ အားလုံးထဲ စိတ်ကြိုက် သုံးစွဲခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုနဲ့ အကောင့် လုံခြုံရေးအားနည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဝင်ငွေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ စတဲ့သင့်ရဲ့ ယာဉ်မောင်းအကောင့်က အရေးကြီးအချက်အလက်တွေကိုအဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းတွေက အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
2. ကျွန်ုပ်တို့ ခရီးသည်တွေရဲ့ အတွေ့အကြုံအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ သင်ကပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုစိတ် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအက်ပ်တွေကို ညံ့ဖျင်းစွာရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီး အချက်အလက်တွေ ခိုးယူခံရနိုင်တဲ့အပြင် ခရီးသည်တွေအတွက် စောင့်ဆိုင်းချိန်လည်း ပိုကြာတာကြောင့် ခရီးစဉ် ပယ်ဖျက်မှုများစွာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ စနစ်ထဲမှာရှိတဲ့ ရိုးသားတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေရဲ့ အသက်မွေးမှုကိုလည်း နောက်ဆက်တွဲထိခိုက်စေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စနစ်ဟာလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက် ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စနစ်ထဲဝင်ရောက်ဖို့ မကောင်းမွန်တဲ့ အက်ပ်တွေကိုသုံးတဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့က အဲ့ဒါကိုသိရှိ ထောက်လှမ်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပလက်ဖောင်းထဲဝင်ရောက်ပြီး တရားမဝင် Grab ယာဉ်မောင်း အက်ပ်တွေကိုအသုံးပြုဖို့ ကြိုးစားမှုအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ကအရေးယူပိတ်ဆို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရိုးသားတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေရဲ့ အသက်မွေးမှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမယ့် အဆင့်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
នៅក្រុមហ៊ុន Grab យើងមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពលំដាប់ល្អបំផុតហើយយើងធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនោះ។ យើងមានក្រុមការងារដែលមានការប្តេជ្ញាធានាថា app និងប្រព័ន្ធរបស់យើងទាំងអស់មានកម្រិតសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដើម្បីការពារព័ត៌មានគណនីអ្នកបើកបររបស់អ្នក។
ម្យ៉ាងវិញទៀត, ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលដំណើរការលើគុណធម៌នៃតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌, អ្នកបើកបររបស់យើងត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយនឹងអ្នកជិះនៅក្នុងលក្ខណៈដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើដំណើរសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ។
ម្តងម្កាលយើងរកឃើញថាអ្នកបើកបរព្យាយាមចូលដំណើរកម្មវិធីរបស់យើងដោយប្រើប្រាស់ apps ដែលមិនត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការដោយ Grab ។
ជាមួយពួកអ្នកលួចទិន្នន័យក្នុងគោលបំណងទទួលផលប្រយោជន៍ដោយអយុត្តិធម៌។ ពេលខ្លះពួកគេត្រូវបានស្វែងរកពីភាគីទី3ដោយមានការយល់ឃើញថាវាផ្តល់ផលប្រយោជន៍ខ្លះដល់ពួកគេជាងអ្នកបើកបរផ្សេងទៀតដែលពឹងផ្អែកលើ app ផ្លូវការ។
អ្នកកំពុងតែចូលរួមដោយចេតនានៅក្នុងសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់បទពិសោធន៍របស់អ្នកជិះរបស់ យើង។ Apps បែបនេះត្រូវបានបង្កើតយ៉ាងខ្ជីខ្ជាបំផុត និងនាំឱ្យមានការរង់ចាំយូរជាងធម្មតាសម្រាប់អ្នកជិះបណ្តាលឱ្យមានការលុបចោលការជិះកើនឡើង។ បទពិសោធន៍បែបនេះប៉ះពាល់ដល់ការជឿទុកចិត្តលើពួកយើងហើយវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកបើកបរដែលមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង។
ប្រព័ន្ធរបស់យើងកំពុងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពទាំងអស់នៅលើកម្មវិធីហើយយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការរកឃើញនៅពេលដែលអ្នកបើកបរណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ apps មិនល្អដើម្បីចូលប្រព័ន្ធរបស់យើង។ យើងនឹងចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងទាំងអស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ apps មិនផ្លូវការសម្រាប់អ្នកបើកបររបស់ Grab ពីការចូលប្រើ កម្មវិធីរបស់យើង។ នេះគឺជាជំហរចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីការពារជីវភាពរបស់អ្នកបើកបរដែលស្មោះត្រង់ របស់យើង។